လွတ်လပ်ရေးရပြီး ရက်ပိုင်းအကြာ ၁၉၄၈ ခု ဇန်နဝါရ်ီလ. ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဗီယက်နမ်တိုက်ပွဲကို လေ့လာအားပေးရန် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ ဗိုလ်ဘုန်းအောင် ( ပြည်သူ့ရဲဘော်ခေါင်းဆောင်) ၊ ဦးသန်း ( ကြည့်မြင်တိုင်) ၊ ဦးဘသိန်းဇံ ( ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ) တို့်နှင့်အတူ ဗီယက်နမ်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဥရောပတိုက်သို့ ခရီးထွက်ခွာပြီး ပြင်သစ်တွင် ပညာသင်ခဲ့သည်။ ( Alliance Francaise - အာလီယွန်ဖွန်ဆဲဇ်) ကျောင်းတွင် ပထမတက်ခဲ့ပြီးနောက် ( Sorbonne - ဆော်ဘွန်း) တက္ကသိုလ်တွင် စာပေရေးရာ မဟာဌာနသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ဦးကျော်ငြိမ်း ဦးဆောင်သည့် စစ်မစ်ရှင်အဖွဲ့ နှင့်် သွားရောက်တွေ့ဆြုံ့ပီး ဦးကျော်ငြိမ်းနှင့်အတူ ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတ မီလိုဗန်ဂျီးလပ်စ်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့သည်။ စီးပွားရေးနဲ့. နိုင်ငံရေးပေါ်လစီတွေ ချမှတ်ကျင့်သုံးတဲ့ အခါမှာ လက်တွေ့ ဘဝက ညွှန်းတဲ့မလွဲမသွေ လုပ်ရမယ့်အကြောင်းတရားများဟာ သီဝရီစာအုပ်က အညွှန်းထက်ပို၍ မှန်ကန်တယ်။ အဲဒါကို ကိုယ်ပိုင်ဥာက်ဖြင့် ချင့်ချိန် ဆုံးဖြတ်ပါ ဟု ဂျီးလပ်စ်ပြောခဲ့သည့် တန်ဖိုးရှိသော စကားတစ်ရပ်အဖြစ် မှတ်သားခဲ့ကြောင်း ရေးခဲ့ပါသည်။